Orylọ ọrụ na - emepụta - China Manufacturers & Suppliers
Steel welded nchekwa ogbe
Ugboro abụọ gbagọrọ agbagọ
Boltless nkuku racking
Faiba glaasi nzọụkwụ ladders
Faiba glaasi ejima nzọụkwụ ladders
Faiba glaasi n'elu ikpo okwu ladders
Faiba glaasi ndọtị ladders
Aluminom nzọụkwụ steepụ
Aluminium ikpo okwu ladders
Aluminium kwuputara ubube
Aluminom nzọụkwụ stools
Ezigbo ụlọ nchara ụlọ
Truckgbọala na-enweghị ike ịkọwapụta
Foldable aka ụgbọala
Vergbọala aka ịgbanwe agbanwe
Foldable n'elu ikpo okwu aka ụgbọala
Ugboro ugbo ala ato ato
Fkpakọba mmekọ bara uru
Rolling ubi ụgbọ
Ihe mgbochi mkpofu faịlụ
Abctools ogbe 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H 5-S ...
36 ″ W x 18 ″ D x 72 ″ H 5-adị na-ese G ...
175kg 350kg 265kg oké ọrụ kpaliri ígwè boltless st ...
Nrụgide oru nchara waya waya welded Nchekwa ogbe Black 77 ″ ...
Single-kwadoro mezuwo IA ịkpakọba Aluminium Platform n'ọkwá St ...
Hot Sale Fechaa faiba glaasi mkpuchi Single-kwadoro S ...
40 nzọụkwụ faiba glaasi ndọtị n'ọkwá FGEH40
3 na 1 kọnvatịbụl aluminum n'elu ikpo okwu aka tilt ụgbọala na ...
Kemeghi Boltless stacking Work Bench Metal Steel Shelving Nchekwa ogbe Unit
Emere mpempe akwụkwọ a na-arụ ọrụ maka ngwa ọrụ dị arọ. Ga - ahụ ebe a na - arụ ọrụ dị elu na ụlọ akwụkwọ, ụlọ nkwakọba ihe na ebe nkesa. A na-ahụkarị ebe a na-arụ ọrụ na nso ebe ụgbọ mmiri na-enweta mbupu. Ha dị mma maka arụmọrụ nkwakọ ngwaahịa na ihe nrụpụta. Ya galvanized ígwè Ọdịdị adịghị mfe nchara na dị nnọọ inogide. Ya kpochapụwo ulo oru anya mgbe niile na-ewu ewu. T
Nrụgide oru Steel Waya welded Nchekwa ogbe Black 77 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H.
Debe ihe ndị dị oké ọnụ ahịa na ihe ndị ọzọ na nchekwa na nke ọma site na Ogwe Nchekwa Nchara. Emere ya ka o sie ike ma sie ike ma nwekwa ike iguzogide 2000 lbs kwa shelf. Ogwe nchekwa ojii a nwere ihe siri ike, mkpuchi waya na shelf ya na-agbanwe na ebe 3 ″ nke na-enye gị ohere ịhazi ha iji gboo mkpa gị. Ọ nwere ike ijide bins nke ngwongwo ụlọ, nchịkọta ngwaọrụ na ngwongwo na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ebe ị na-adọba ụgbọala, ihe ọrụ sh ...
Vietnam Nrụgide oru Elu Garage Nchekwa System ogbe Metal Iji Boltless Rivet Shelving N'ihi Home
The size nke Z-doo boltless ígwè shelving na-eji ire ụtọ imewe ziri ezi bụ 36 `` W × 18 '' D × 72''H, 5 MDF mbadamba shelves, 16 ezigbo uprights, 20 Z-doo, na ibu ikike nke ọ bụla oyi akwa bụ 800lbs.
Mpụga mpụga nke nwere ihu dị mma na-emechi ọnọdụ dị n'ime nke nwere oghere gourd nke na ọdịdị nke ogbe a na-enweghị eriri dị elu.
Oké ọrụ ígwè shelving nchekwa ogbe shelves maka iji ụlọ
SG9040C bụ shelf nkuku, nha bụ 1800 * 900 * 900 * 400 * 400mm, ejiri ya mee galvanized ígwè, ibu nke akwa ọ bụla bụ 175kg. Ọ nwere ogidi 10 agbagoro agbagọ, ogidi iri abụọ na ise, mgbatị nkwado etiti 5, akụkụ 5 nke nkebi (can nwere ike ịhọrọ bọọdụ MDF ma ọ bụ pọdkulọd) Ọ na ọtụtụ-eji na-adọba ụgbọala, nkwakọba, ụlọ, na griin haus.
Nnennen onu boltless rivet shelving 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H metal shelf ogbe maka nkwakọba nchekwa
Ihe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ bụ ihe eji arụ ọrụ ike bụ ihe eji edozi Z bụ ezigbo nchekwa maka ịchekwa ụlọ ma ọ bụ mpaghara ọ bụla. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ, ọfịs, ụlọ nkwakọba ihe, ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe nchekwa dị mkpa. Ngwaọrụ multifunctional a nwere ike ịchekwa ihe dị iche iche ma nwee shelf dabara adaba nke enwere ike ịhazi 1 inch / 1/2 ọ bụla. Ihe dị arọ, enweghị nsogbu, shelf ọ bụla nwere ike iburu 800 pound. Thedị na-agbanwe agbanwe na-enye ohere ka a kpọkọta unit ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'ime shelf ma ọ bụ kwụ ya n'ime ebe ọrụ ibe 2. Inogide-adịgide adịgide imecha ke red.
Oké ọrụ ọkara ibu akụrụngwa metal mpempe akwụkwọ n'ụlọ nchekwa ogbe ígwè shelf
Mepụta bara uru vetikal ohere a sleek-achọ shelving unit si. Na ijikọta ọmarịcha mma nke oge a na njirisi nwere ike idozi ya, akụkụ 4-shelf anọ dị na mbara igwe gị okpukpu anọ, ya na shelf nchekwa ọ bụla nwere 30kg max (ma kesaa ya) Ihe mgbakwunye bara uru na ebe obibi ọ bụla, ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ebe nchekwa, ebe nchekwa shelf 4 na-enye ike dị mma, ịdị mma na ntụgharị. N'ozuzu Dimkpa 75cm obosara site 30cm omimi site 145cm elu. Ike: shelf ọ bụla na-ejide 30kg max (ma kesaa ya). Total unit jidere 120kg.
1.2 mm ọkpụrụkpụ kpaliri ígwè mpempe akwụkwọ nchekwa shelving ogbe usoro
Kpochapu ihe ndi ozo n'ime ulo gi, ulo oru, ma obu ebe a na-adọba ụgbọala, ma debe ngwa ọrụ na ngwa ahịa gị niile ebe ị nwere ike ịchọta ha na 5lọ Nche Nchekwa nke 5-Shelf 3000 Pound. Ọ dị mfe ịgbakọta, ngalaba a na-echekwa mkpọchi maka mgbako na-enweghị mkpokọta. Owuwu siri ike nke nwere ihe eji ekechi ya na ihe mkpuchi ya na-etinye ya na oghere ya, ma na-agbapu oghere di iche na 1.5 ka i wee nwee ike hazie elu. The dum onwe unit guzo na 48 sentimita asatọ n'obosara na 72 sentimita asatọ elu maka a imewe na maximizes ohere. A na-eji ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ dị arọ iji guzogide iji ihe dị arọ maka afọ ndị na-abịa. Tinye ego na Edsal 5-Shelf 3000 Pound Na-echekwa Nchekwa Nchekwa maka onyinye nke nchekwa na-enye.
Nnukwu usoro shelf usoro na-ebunye 1200lb 4 tier metal waya shelves ogbe
Mpempe akwụkwọ WR481872T4 bụ nnukwu igwe eji arụ ụlọ, nke SP482472 dabara nke ọma maka ime ụlọ, ọmụmụ ihe, ebe ụgbọala na-eguzo na mbadamba ise, nwere ike mezuo mkpa gị niile maka ụlọ.
Na WR481872T4 Welded Steel Garage Shelving Unit, ị nwere ike ịchekwa ngwa ngwa, ihe buru ibu buru ibu na nchekwa ma debe ebe obibi gị ma ọ bụ oghere ọrụ dị mma ma dị mma, ngwa ngwa na mfe. Ngwongwo ihe eji eme ihe a nwere ike iburu ọtụtụ puku ngwungwu, akụrụngwa, ngwaọrụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa ma were naanị nkeji oge iji gbakọta.
Ọdịdị dị elu nke na-adịghị ọcha ahịhịa na-adịghị ahụkebe nke 5 shelf shelf, nke nwere dral metal
Were ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ebe a na-edebe ihe gaa n'ọzọ na-esote ya na High-Quality Non-Dust Metal Shelving Unit 5 Shelf Racks Shelf Unit With Dural Metal. Ulo oru uzo ise nke ulo oru uzo ise nwere ike kwado 265kg. maka ngụkọta nke ikike kilogram 1,352. Ihe mkpuchi a dị oke egwu na-ejikwa atụmatụ ndị dị egwu dị ka mkpuchi elu na ụkwụ naịlọn iji gbochie ịmịgharị na ihe ndozi.
Lọ Nkwakọba Ihe Ngwaahịa 4 Nkeji Boltless Shelving
Na SP600C welded ígwè ụgbọala ụgbọala shelf, ị nwere ike mfe ịchekwa keukwu, oversized ihe n'enweghị ihe na-eme ka ebe obibi gị na-arụzi ụgbọala ma ọ bụ wọkspeesi mma n'anya na idozi, ngwa ngwa na mfe. Ngwongwo ihe eji eme ihe a nwere ike ijikwa ọtụtụ puku ngwungwu, akụrụngwa, ngwaọrụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa ma were naanị nkeji oge iji gbakọta.
Abctools Rack 48 ″ W x 24 ″ D x 72 ″ H 5-shelf Adịghị Ọrụ Kpaliri Steel Metal Shelving Boltless stacking Nchekwa ogbe
Site na itinye 5-oyi akwa Abctools Rack, mepụta ụfọdụ ohere nchekwa na ụlọ gị. Ihe a nwere ihe eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ eji arụ ọrụ na ihe eji eji oji, nke na-enye ume na echiche nke ejiji.
36 ″ W x 18 ″ D x 72 ″ H 5-shelf-ese Agba kpaliri Steel Waya Boltless Rivet ogbe
Nnukwu akwa 5-oyi akwa na-eme mkpọtụ, yana ihe eji emepụta ihe eji mepụta ụdị Z na anya na-acha anụnụ anụnụ, bụ ịhazi nnukwu iberibe n'ime ala gị, ụlọ ọrụ, ụlọ ụgbọala, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe achọrọ ịtọ arọ dị elu Ihe kacha mma nchekwa nchekwa maka nchekwa nke ihe.
A ga-aza email gị n'ime awa 24.
Rịọ see okwu
Obere Nchekwa Obere Ogbe shelf Ime ụlọ ime ụlọ Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Shelf maka ulo